Omena amin'ny fahafenoany ny Fanahy Masina
“Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano niangonany” Asa. 2:2.
Rehefa nirotsaka ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pentekôsta, dia tahaka ny rivotra mahery nifofofofo izany. Nomena tsy nisy fetra ny Fanahy, satria nameno ny toerana rehetra nipetrahan’ny mpianatra izy. Tahaka izany koa no hanomezana ny Fanahy ho antsika rehefa vonona ny handray izany ny fontsika. Aoka ny mambran’ny fiangonana tsirairay handohalika eo anatrehan’Andriamanitra, ka hivavaka amin-kafanam-po ho amin’ny fanomezana ny Fanahy. Aoka izy hivavaka manao hoe: “Tompo ô, ampitomboy ny finoako. Ataovy takatro ny teninao. Velombelomy amin’ny fanatrehanao aho. Fenoy ny Fanahinao ny foko mba ahafahako mitia ny rahalahiko tahaka ny itiavan’i Kristy ahy”.
Hitahy izay manomana ny tenany ho amin’ny asa fanompoana Azy tahaka izany Andriamanitra. Ho takatr’izy ireo ny hevitry ny hoe manana fahatokiana avy amin’ny Fanahy, satria nandray an’i Kristy tamim-pinoana izy. Ny fivavahan’i Kristy dia midika zavatra mihoatra lavitra noho ny famelana ny heloka; midika izany fa nesorina ny fahotana, ka fenoina ny Fanahy Masina ny toerana lasa babangona. Midika izany fa hazavain’Andriamanitra ny saina, foanana ny izaho ao am-po ka fenoina amin’ny fanatrehan’i Kristy. Rehefa vitan’ny mambran’ny fiangonana io asa io, dia ho velona sy miasa ny fiangonana.
Tokony hikatsaka amim-pahamatorana sy amim-pahitsiana fatratra izay hampiray saina sy hampiray tanjona antsika isika. Ny batisan’ny Fanahy Masina ihany, ary tsy zavatra latsak’izany, no afaka hitondra antsika ho amin’io fenitra io. Aoka isika, amin’ny alalan’ny fandavan-tena feno, hanomana ny fonstika handray ny Fanahy Masina mba hisy asa lehibe hatao ho antsika, ka mba hahafahantsika hiteny hoe: “Indro ny fahatsaran’Andriamanitra sy ny fitiavany!” fa tsy hoe: “Jereo ange izay ataoko e!”
Afaka manambara ny fitahiana avy amin’ny Fanahy Masina isika, kanefa raha tsy manomana ny tenantsika handray izany isika, inona no soa azo avy amin’ny asantsika? Miezaka mafy amin’ny herintsika rehetra ve isika mba hanatratra ny halehiben’ny lehilahy sy vehivay ao amin’i Kristy? Mikatsaka ny fahafenoany ve isika, ka miezaka mandrakariva hanatratra ny marika napetraka teo anoloantsika, dia ny fahatanterahan’ny toetran’i Kristy?